Soo dejisan Shazam 5.11.0 – Vessoft
Soo dejisan Shazam
ATM – software ah in la aqoonsado kuwan raadkaygay music iyo fanaaniinta ay. Shazam isticmaalaa makarafoonka qalab si ay u qoraan ilo dhawaaqa iyo is barbar jab lagu duubay heeseed la database ee codsiga. ATM u saamaxaaya in ay qoraan music aan xidhiidhinaya internet-ka oo si toos ah u hesho macluumaadka track by xidhiidhinaya shabakada. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay uga iibsadaan files audio ee Amazon ama dukaamada Play Google, daawato videos on YouTube iyo muusiko dhegayso, iyada oo raadiyaha ama adeeg Spotify. ATM u saamaxaaya in ay arkaan iyo darto heeso caan maktabadda music yihiin in qaybsan qaybaha kala duwan oo iyaga la saaxiibo on shabakadaha bulshada wadaagaan.
Qeexid magacyada halabuurka ah muusig
Muujiya macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan artist
Kartida aad u daawato video on YouTube
Shazam Software la xiriira: